दलान नेपाल : वार्ता प्रक्रिया लम्बिदा वा नहुदा के हुन सक्छन ?
सरकारी पक्ष वा प्रमुख तीनै दलले आफुहरु वार्ता मार्फत समस्या सम्बोधन गर्न लागी परेको भनिरहदा पनि क्रियाकलाय तत्कालै वार्ता मार्फत कुनै ठोस निकास निस्कला भन्ने प्रष्ट छैन । वार्तामा बसेका मोर्चाका कतिपय शिर्ष नेताहरुको भनाई सरकारी पक्ष वार्ताको वारेमा रती पनि गम्भिर नै देखिएका छैनन । आन्दोलन भएको १ सय दिन नाघि सक्दा सवै पक्षहरुको आ आफनै आकंलन र विश्लेषण होला तर प्रश्न उठछन वार्ता नभए अव के हुन्छ त ?
यसको ठोस जवाफ अहिले नत आन्दोलनरत मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले दिन सक्छन नत सरकारी पक्षले । छठ पछि राजमार्गमा आन्द्यानेलन चर्किए पनि सरकारी पक्षले सेना परिचालन गर्ने तयारी जुटीरहेको खबरहरु आईरहेको छ । काठमाडौको सताधारी कतिपयको बुझाई मधेशमा सेना परिचालन गरे पछि आन्दोलन साम्य हुन जान्छन र अवस्था फेरी सहजता तर्फ उन्मुख होलान । तर यो कदम सता पक्षका लागी अर्को आत्मघाती सावित हुने छ । सुरुमा मधेशका सदरमुकाहरुमा केन्द्रित आन्दोलन टिकापुर घटना पछि सरकारी पक्षले सदरमुकामहरुमा सेना परिचालन गरेकै कारण गाउ गाउमा घुसेको थियो र आज मधेशका सदरमुकामहरु भन्दा वढी मधेशका गाउहरु आन्दोलित अवस्थामा छन ।
सरकारी पक्षको एक तर्फ सेना परिचालन गर्ने र अर्को तर्फ आन्दोलन लम्बिदै जादा आफै समाप्त हुने निष्कर्षमा हुन सक्छ र तर त्यस्तो होला भन्ने कुनै यकिन छैनन । वरु यकिनका साथ यो भन्न सकिन्छन कि यदी जारी आन्दोलनको व्यवस्थापनमा काठमाडौ उत्रेनन भने यसको दुष्परिणाम वडोे घातक हुन सक्छ । मधेशका अधिकांश वुद्धजिवीहरुको बुझाईमा यसमा काठमाडौका केन्द्रीय भनाउदा मिडियाहरुको समेत साकारात्मक भुमिका सुरु देखि नै देखिएका छैन । उनीहरु प्रष्टताका साथ भनिरहेका छन, यदी काठमाडौका मिडियाहरुले जारी मधेश आन्द्योलनको उचित कभरेज मात्रै गरी दिएको भए सरकारी पक्ष माथी दबाब सिर्जनाको वातावरण बन्न सक्थ्यो र अवस्था आज जतीको जटीलतामा नफस्न पनि सक्थ्यो । तर आजको अवस्था त जटीलतम मोडमा पुगेकै हुन । अव के हुन्छ यसको वारेमा कसै संग कुनै ठोस जवाफ छैन । २ मंसीरको निर्णयक भनिएको वार्ता औपचारिकतामै सिमित भए पछि मोर्चाले ३ मंसीरमा आन्दोलन लामो जाने भएकाले विद्यालयहरु खोल्ने निर्णय गरे ।
तर मोर्चाको उक्त निर्णय आए लगतै मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सक्रिय युवाहरु त्यसको खुलेर आलोचना मात्रै होईन कि प्रतिरोध मै उत्रे । मधेशमका कतिपय जिल्लाहरुमा अहिले सम्म पनि विद्याँलयहरु सुचारु हुन सकेका छैन । त्यसैगरी मोर्चाले औषधीका गाडीहरु नाकाहरु वाट भित्रन दिने पनि निर्णय गरेका थिए । तर त्यस पछि आन्दोलनकारीहरु लागातार रुपमा औषधी वोका गाडीहरु र एम्बुलेन्सहरु निसाना बनाए ।
यसले काठमाडौका एक थरीले आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणमा छैन भन्ने विश्लेषण गरीरुहेका होला तर मधेशका धरातल यती गरमाईसकेका छन यस्ता विश्लेषणहरुले कुनै फरक पार्न सक्दैन ।
मोर्चाको ३ मंसीरमा भएको निर्णय लगतै ४ मंसीरमा जनकपुरमा सक्रिय रुपमा आन्दोलनमा सहभागीता हुदै आएका ११ ओटा युवा क्लवहरुको छुटै बैठक भयो । बैठकमा मोर्चाले आन्दोलनलाई समाप्त पार्न विद्याँलयहरु खुल्ला गर्ने र ओषधीका गाडी भित्रन दिने निर्णय गरेको हुन सक्ने आकंलन सहितको आशंका मात्रै होईन त्यस विरुद्ध छुटै मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय समेत गरे । त्यसको भोली पल्टै ५ मसंीरमा भएको ती ११ ओटा संस्थाहरुको सयुक्त बैठकले छुटै गैर राजनितीक गठवन्धन वनाउने निर्णय गरे । जनकपुर क्षेत्र आन्द्योलनको मुख्य उर्जाको रुपमा देखिएका ती युवाहरुले त्यस्ता गठवन्धनको मात्रै घोषणा गरेनन । उनीहरुले जारी मोर्चाको राजमार्ग आन्दोलनलाई सशक्क्त बनाउदै थप आफना छुटै कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेका छन । उनीहरुले आफना छुटै कार्यक्रमहरुमा मधेश भित्र एमालेका नेताहरु पार्टी परित्याग गर्ने माहौल बनाउने औपचारिक निर्णय संगै अनौपचारिक रुपमा सरकारी पक्ष यसरी नै उदासिन रहेको खण्डमा मधेशमा समानानन्तर सरकार समेत चलाउने वारेमा गम्भिर विर्मशहरु गरेका थिए । जसले भोलीको अवस्था वारेमा आकंलन गर्न गाहे छैन । त्यसैले होला जानकारहरु भन्छन वार्ता नहुदा वा जारी आन्द्योलन यसरी नै लम्बिन रहने हो भने काठमाडौले दिन दुगुणा रात चौगणा चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने लिष्टहरु थपिदै जान्छन । त्यसैले मधेशीहरुको संघियता प्रतिको वढदो मनोविज्ञानलाई धेरै किचलो नबनाउदै त्यसलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा प्रमुख दलहरुको पनि हित हुन्छन । अन्यथा त्यसको दुष्परिणाम भोग्न तयार रहे हुन्छ ।